Bilaogin-tsakafo: Pata de Cerdo avy eo Espaina, Katsu Kisoa avy ao Japana ary Kisoa nendasina miaraka amin’ny Cincaluk avy ao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Bilaogin-tsakafo: Pata de Cerdo avy eo Espaina, Katsu Kisoa avy ao Japana ary Kisoa nendasina miaraka amin'ny Cincaluk avy ao Malezia
Voadika ny 10 Jolay 2018 3:36 GMT
#1: Avy ao Espaina, Canary Girl mizara nahandro matsiro mba hikarakarana Endy kisoa amin'ny fanaon'ny nosy Canary (Pata de Cerdo)
This recipe is my mother in law's, she makes thee best “Pata” around. Tender, juicy, and a hint of spice around the edges. She gets it nice and crispy on the outside too, which for some reason, I can't seem to manage, but nonetheless the flavor is out of this world. “Pata” is normally served very thinly sliced on baguettes with a bit of salt
Avy amin'ny rafozako ity nahandro ity, mikarakara “Pata” tsara indrindra eo amin'ny manodidina izy. Malemy, be rano, ary tsiron-javamanitra manodidina ny sisiny. Ataony mahafinaritra sy mikarepoka ihany koa ny ivelany, izay noho ny antony maromaro, dia toa tsy mahomby amin'ny fikarakarana izany aho, saingy na izany aza, tsy manam-paharoa ny tsirony. Aroso amin'ny tetika manify miaraka amin'ny sira kely nararaka taminy ny “Pata” amin'ny ankapobeny, ary azo atao sakafo maraina na sakafo atoandro rehefa aroso miaraka amin'ny frity na salady. Jereo ny fikarakarana azy…
#2: Avy ao Japan, Nook & Pantry mahandro karazana Kisoa Katsu:
Ny kisoa katsu na tonkatsu dia kotoletan-kisoa nendasina miaraka amin'ny saosy katsu, saosy tahaka ny Worcestershire. Araka ny Wikipedia, iray amin'ireo sakafo malaza indrindra any Japana izy. Mahatsikaiky, fa noforonina tany amin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 ho toy ny karazana nahandro amin'ny endrika Tandrefana ny katsu mba hifanaraka amin'ny tsiro Japoney, saingy nanjary niha-Japoney hatrany izany ary aroso miaraka amin'ny vary sy lasopy miso. Iray tamin'ireo sakafo hariva nankafiziko indrindra nandritra ny taom-pianarako voalohany izany. Andrahoy ary izany
#3: Avy ao Filipina, Market Manila mizara nahandro hikarakarana Ubod, Sugpo, Alimasag ao amin'ny Baboy (Fom-boanio miaraka amin'ny makamba, foza sy kisoa)
Mampihetsi-po tanteraka, fomba feno tsiro mba hankafizana ubod na fom-boanio mangatsiatsiaka tanteraka. Nisy mpiara-miasa amiko iray nitaritarika sombina tratram-boanio ngezambe vao avy nianjera tao Bohol nankany Cebu tamin'ny herinandro lasa teo, ary nahafaly ahy ny vinavina hanao ubod lumpia vaovao amin'izany. Vakio bebe kokoa…
#4: Avy ao Malezia, Rasa Malaysia mahandro cincaluk (makamba notehirizina) ary mikarakara Nahandro Nyonya: Kisoa nendasina miaraka amin'ny Cincaluk (Heh Ya Kay Char Bak)
Androany, omeko anao ny ampahany faharoa amin'ity fangaron-tsakafo tsy manam-paharoa ity miaraka amin'ny kisoa nendasina miaraka amin'ny cincaluk. Fantatra amin'ny fitenim-paritra Hokkien, Heh Ya Kay Char Bak, matetika nandravaka ny latabatra fisakafoanan'ny fianakaviako ity famoronana Nyonya ity rehefa nihalehibe aho. Raha tsy dité ho an'ny rehetra ny cincaluk, ho an'ireo izay tia azy, manome tsiro tena miavaka sy tsy fahita ho an'ny fangaron'ny ventin-tsakafo betsaka indrindra izy, dia ny kisoa, amin'ity tranga ity. Tohizo ny famakiana…
#5: Avy ao Kiobà, Rachel's Bite mamelona indray ny Kotoletan-kisoa Kiobàna miaraka amin'ny Mojo sy Ovy nopotserina Sofrito:
Sakafo matsiro mahatalanjona ity. Samy tsara avokoa ny sakafo tsirairay, saingy mahafinaritra izy ireo rehefa tafakambana. Nifantoka tamin'ny fahandroana sakafo Aziatika maromaro aho tato ho ato, nanadino aho fa misy tokoa ireo nahandro mahafinaritra mahazatra sasany tena matsiro. Tena matsiro ny kotoletan-kisoa noho ny fandomana azy narahana fangaron-java-manitra. Ary mameno tanteraka ny zava-manitra rehetra ao anatin'ny kotoletan-kisoa ny ovy. Tena mahafinaritra tokoa amin'ny mahazatra fahiny ny sakaibe voatetika efajoro ao anatin'ny ovy. Jereo izany ankehitriny
#6: Sakafo Thai & Lao mizara nahandro hikarakarana Saozaha Khao – Lasopy kisoa sy voana saozaha masira
Avy any amin'ny faritra avaratr'i Laos ity lasopy ity. Nahazo ny nahandro avy amin'i Isan rahavaviko Thailandey aho, izay avy any avaratr'i Laos ny vadiny. Ireo fangaron-tsakafo tena manan-danja indrindra dia ny paty pho lehibe, saosy saozaha mainty ambony kalitao, voana saozaha masira. Ny saosy saozaha masira dia tahaka ny endrika tsy mihinan-kena (vegetarien) amin'ny ‘ba dek’ izay trondro gourami masira. Vakio bebe kokoa…
Sary nalain'i Melissa De Leòn